COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ခရီးစဉ်ပြေးဆွဲမှု ရပ်နားလိုက်သည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လေကြောင်းလိုင်း (၈) ခု | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပျံသန်းပြေးဆွဲနေသည့် လေကြောင်းလိုင်းအချို့၏ ပြည်ပခရီးစဉ်ပြေးဆွဲမှု ရပ်နားခြင်းနှင့် ရပ်နားမည့်အချိန်ကာလကို အများပြည်သူများသိရှိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Thai Airways လေကြောင်းလိုင်းသည် Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် TG2301 နှင့် TG2302 (WE301/302) ခရီးစဉ်များကို ၂၀၂၀ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့မှစ၍ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Myanmar National Airlines လေကြောင်းလိုင်းသည် Yangon-Bangkok-Yangon ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် UB-019 နှင့် UB-020 Morning Flight များကို ၂၀၂၀ မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
3 & 4. Singapore Airlines & Silk Air
Singapore Airlines လေကြောင်းလိုင်းနှင့် Silk Air လေကြောင်းလိုင်းများသည် ၂၀၂၀ မတ်လ (၂၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့အထိ ပျံသန်းပြေးဆွဲမှုများကို ယာယီရပ်နားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Korean Air လေကြောင်းလိုင်းသည် ICN-RGN-ICN ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် KE471 နှင့် KE472 Flight များကို ၂၀၂၀ မတ်လ (၉) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားခြင်းကို ၂၀၂၀ ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးရပ်နားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Qatar Airways လေကြောင်းလိုင်းသည် Yangon-Doha-Yangon ခရီးစဉ်များကို ၂၀၂၀ မတ်လ (၂၄-၂၆-၂၇-၂၉-၃၀-၃၁) ရက်နေ့များအပြင် ဧပြီ (၁) ရက်နေ့မှ (၃၁) ရက်နေ့အထိ၊ မေ (၁) ရက်နေ့မှ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
7. Vietnam Airlines
Vietnam Airlines လေကြောင်းလိုင်းသည် Myanmar- Vietnam ပျံသန်းပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ခရီးစဉ်များကို ၂၀၂၀ မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့မှစ၍ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Indigo လေကြောင်းလိုင်းသည် Kolkata-Yangon-Kolkata ခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် (6E1398 နှင့် 6E1399) ခရီးစဉ်များကို ၂၀၂၀ မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့ မှ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့အထိ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Source: Columbus Travels Myanmar
Business Health & Wellness Read 1014 times
လာမယ့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ( ၁၄ ) ခု
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လုပ်ငန်း (၁၀) ခုကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေး
တက္ကသိုလ်ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ရန် အထက်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်
ယုဇနပလာဇာဈေးကို ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်